CFA VS. CPA - Waa kuwee Certification waa Better? [It's a Close Call]
CFA vs CPA: Waa kuwee waa ku Khayrroon yahay in aad loogu talagalay?
23 Aug CFA vs CPA: Waa kuwee waa ku Khayrroon yahay in aad loogu talagalay?
Professionals ee maaliyadda inta badan ku eryan shahaadooyinka xirfadeed si loo horumariyo xirfadaha ay. Shahaado Xisaabiyaha Guud (CPA) iyo Falanqyeeyaha Chartered Financial (CFA) debatably waa labada horyaal ee ugu haybadda leh ee beeraha ay ka soo jeedaan. Maxay ku kala duwan yihiin, iyo mid ka mid ah taas oo ka wanaagsan? Farqiga u dhaxeeya laba yihiin waxa meel kasta oo daboolayaa iyo fursado shaqo. CPA waxaa loo arkaa inay "suunka madow ee xisaabaadka" oo aad isku diyaarinaya xirfadaha ee Accounting iyo Baarista, halka, Barnaamijka CFA diiradda on Management Investment daboolaya mawduucyada ballaadhan sida Maaliyadda Corporate, Maamulka portfolio, taagayo, Dakhliga go'an, Investments Alternative oo aad isku diyaarinaya xirfadaha ee Investment Banking, Maamulka portfolio, Financial Research iwm. Intii ay waydiisan su'aashan in "oo waa ka wanaagsan?", waa in aad la weydiinaya "taas oo kuu wanaagsan aad".
CFA vs CPA: codsiga
CFA ama CPA: Content Exam iyo Format
Sidaas, Waa kuwee waa ka wanaagsan?
CPA A waa naqshada ah ee xisaabaadka aan dadweynaha, xisaabaadka cashuurta, iyo xirfadlayaasha maaliyadda dooni horyaalka cadaynaya khibradooda tirada crunching. CPA A ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay xuquuq sharci ah inay la soo wareegto warbixinta hubinta taas oo ka dhigaysa gaar ah horyaalka. Sida laga soo xigtay AICPA ah, CPAs qallafsan kasban 10-15% badan marka ay bilaabaan shaqada marka loo barbar dhigo xisaabaadka non-aqoonsiga. Sidoo kale CPAs waa soo jiidasho loo shaqeeyayaasha badan non-CPAs. Sida laga soo xigtay laga xoreeyo dalka ah. Bureau of Statistics Labor (BLS), xisaabiyaha iyo hanti shaqooyinka, oo ay ku jiraan CPA ee ka mid ah xirfadlayaasha kale xisaabaadka, ayaa la saadaalinayaa inuu kobco 13 boqolkiiba intii u dhexeysay 2012 iyo 2022.
horyaalka CFA waa caadiga ah dahab maaliyadda iyo maalgelinta. Haddii aad raadinayso xirfado sida falanqeeyayaasha sinaanta, maamulayaasha fund, iyo xirfadlayaasha maareynta hantida ama guryo fund deyr, tani waa horyaalka ugu fiican ee aad ka heli karto. CFAs diiradda saaraan maamulka maalgashi.
Shaqo top of CFAs ka mid ah shirkadaha maaliyadeed ee ugu ixtiraamo ee dunida, sida, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, iyo Wells Fargo.
Qaar badan oo ka mid ah ay yihiin bangiyada maalgashiga, laakiin Barnaamijka CFA ka shisheeya gaadhay aqoonta iyo xirfadaha ugu habboon si xirfad maamul-gashiga caalamiga ah eegaysana ee dhakhtarka.
Shuruudaha xaq u yeelashada horyaalka CPA waa ugu sareeya ee ka mid ah oo dhan shahaadooyinka la xiriira maaliyadda. Waa in aad haysataa ugu yaraan shahaadada bachelor 4-sano iyo xaaladaha inta ugu badan, 150 saacadood credit (oo u dhiganta 5 sano oo waxbarasho sare) si uu fadhiisan waayo imtixaanka. liisanka CPA ayaa la siiyo by kasta oo ka mid ah 55 goboleedyada ama awood ee dalka Mareykanka. Sababta oo ah caqabad sare ee laga soo galo iyo habka codsiga adag, waa arrin geedi socod adag. CFA waa naqshada ah siiyo by Machadka CFA, urur aan faa'iido doon ahayn oo caalami ah. Machadka wuxuu ku salaysan yahay in Maraykanka, laakiin waxaa jira 3 xafiisyo goboleed iyo 200 local chapters around the world. Waxaad codsan kartaa iyada oo machadka iyo codsiga waa fudud. Inta aad haystaa dibloomka jaamicadeed (daruuri ma aha 4 sano), waxaad ku fadhiisan kartaa imtixaanka. xataa Waxaad qaadan kartaa imtixaanka ka hor ka qalin
Imtixaanka CPA wuxuu leeyahay 4 qaybaha imtixaanka: Financial Accounting & Warbixinta, Audit & ka qabeen, Xeerka iyo Deegaanka Business & fikradaha. Imtixaanka waa 100% Computerized ka kooban su'aalaha kala doorashada badan, thay hawl-ku saleysan (daraasado), iyo isgaarsiinta qoran. Waxaad dooran kartaa inaad u qaadato 4 qaybo ka mid waqti, 2 mar, ama xataa 4 waqti isku mid ah. Oo waxaad ku fadhiisan kartaa imtixaanka waqti kasta ee suuqa kala imtixaanka CPA imtixaanka, taas oo marka hore ku 2 bilood ee quarter kasta iyo wax kasta oo xarumaha Prometric dhan Maraykanka. Waxaa sidoo kale jirrabaya xarumood ee Japan, Brazil iyo 4 dalalka Bariga Dhexe.
looxyada gobolka intooda badan ku wareegsan u baahan 1 sano oo waayo aragnimo ah xisaabinta inta aysan qaadan liisanka, iyo dalalka ugu waayo-aragnimo this ayaa in la kormeero oo xaqiijiyey CPA firfircoon.
The format imtixaanka CFA waa badan dabacsan yar. Waxaa jira 3 heerarka imtixaanka, oo aad u baahan tahay si ay u buuxiso si ku habboon in ay u guuraan on xiga. imtixaanka waxaa uu diiradda on falanqaynta iyo faylalka dhaqaale maamulka halkii xisaabinta, hubinta iyo canshuuraha. Baaritaanka waxaa maamula laba jeer sannadkii Heerka 1, iyo sanadka ah ee Heerka mar 2 iyo 3. Waxaa jira xarumaha imtixaanka caalami ah oo badan imtixaanka CFA ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha magaalooyinka. Inkasta oo farsamo ahaan waxaad buuxin kartaa imtixaanka CFA gudahood 18 bilood (heerka 1 bishii December, heerka 2 in June, heerka 3 ee June sanadka ka dib), musharaxiinta ugu qaado 4 sano si ay u dhamaystiraan imtixaannada. Waxay qaadataa waqti dheer si ay u noqdaan CFA a badan CPA ah. waxaa loo baahan yahay in aad leedahay 4 sano oo waayo-aragnimo ku habboon si aad u hesho naqshada CFA ah. Your kormeeraha, kuwaas oo la cadeeyo doonaa waayo-aragnimo, uma baahna in ay CFA a.
Marka la go'aaminayo in ay u tagaan, waayo, CFA ama CPA, waxa ugu horeeya ee ugu horreysa aad u baahan tahay in aad ka fikirto waa mustaqbalkiisa. Ka sokow in, Horyaalka CPA leeyahay waxbarasho iyo waayo-aragnimo dheeraad ah oo lagu xakamaynayo looga baahan yahay, laakiin marka aad is baxday, geedi socodku waa ka dhaqsiyo. CFA waxay leedahay ooday entry hoose laakiin waqti dheer ay qaadato si ay u dhamaystiraan. Go'aanka u dhexeeya labada waa dambeyntii ilaa adiga iyo gool aad mustaqbalkiisa inay. Iska bilaabay oo la ugu fiican Course Review CPA ama find the best CFA Study Materials
Taariikhda uu dhacayo: October 19, 2018
CPA, Surgent CPA Review, dhimista Exclusive 41 isticmaalaa maanta
Taariikhda uu dhacayo: October 20, 2018
Last isticmaalay 31 seconds ago
CPA, Wiley CPAexcel, Ugu deeq u Gaarka ah 34 isticmaalaa maanta
CPA, Roger CPA Review, dhimista Exclusive 38 isticmaalaa maanta
Taariikhda uu dhacayo: October 18, 2018
CPA, Surgent CPA Review, dhimista Deep 37 isticmaalaa maanta
CPA, dhimista Exclusive, Fast Forward Academy 33 isticmaalaa maanta
CPA, Ugu deeq u Gaarka ah, Burburin CPA The 39 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 11 minutes ago
Last isticmaalay 54 seconds ago
CPA, Roger CPA Review, dhimista Deep 37 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 36 seconds ago
CPA, Yaeger CPA Review, dhimista Exclusive 36 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 21 seconds ago
CPA, Gryfina, dhimista Exclusive 38 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 1 seconds ago
CPA, Wiley CPAexcel, dhimista Exclusive 38 isticmaalaa maanta
CPA, Roger CPA Review, U bandhigidda maalgelinta 35 isticmaalaa maanta
CPA, Surgent CPA Review, U bandhigidda maalgelinta 37 isticmaalaa maanta
CPA, Surgent CPA Review, Trial Free 36 isticmaalaa maanta
CPA, Roger CPA Review, kale 33 isticmaalaa maanta
CPA, Wiley CPAexcel, kale 34 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 26 seconds ago